Global Voices teny Malagasy » Tsy Misy Firenena Ho An’ireo Ankizy Tsy Manana Ray ao Bhutan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Marsa 2016 3:15 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsimo, Bhutan, Fampandrosoana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Reny iray miaraka amin'ny zanany eo am-babney ao Bhutan. Sary : Steve Evans / Flickr. CC 2.0. Navoakan'i Kevin Rothrock.
Bhutan , firenena iray ao amin'ny faritr'i Himalaya, misy mponina manakaiky ny 750.000 eo, dia fantatra amin'ilay fehezanteny hoe “fiadanam-pirenena faobe”— teny faneva noforonina tany amin'ny 1972 tany mba hanehoana ny fanolorantenan'ny firenena hanaraka ny fitaizana ara-panahy Bodista fa tsy ny fivoarana ara-materialy entin'ny Tandrefana. Ny lalàna henjana ao Bhutan momba ny zompirenena, dia tsy nanao zavatra betsaka hanosehana ny fiadanana amin'izao androntsika izao, satria noho ireo lalàna maro ao Bhutan dia an'arivony maro ireo ankizy Nepale nilaozan'ny rainy no nanjary olona tsy manana firenena  niaviana.
Lazain'ny lalàm-panorenan'ny  firenena fa :
Ny olona iray, izay avy ao Bhutan daholo ny ray sy ny reniny, dia ho olompirenena natoraly teraka tao Bhutan.
Mba hahamafy kokoa ny toedraharaha ho an'ireo tsy manana firenena indrindra indrindra, tsy afaka ny hahita asa ianao ao Bhutan, tsy afaka hividy fanànana, na hahazo pasipaoro handehanana hivahiny any ivelany, raha toa ka tsy manana taratasy milaza ny maha-olompirenena anao.
Vishal Arora, mpanao gazety, mpanoratra, ary mpamokatra sarimihetsika monina ao New Delhi, dia namoaka fanadihadiana iray momba ilay olana, ho ampahany amin'ny fanentanana iray antsoina hoe “Media Project”:
Rehefa ilaozan'ny rainy, beazin'ny reniny ireny ankizy ireny, izay misedra olana ara-bola henjana amin'ny fanabeazana azy ireo kanefa tsy mahavita hiantoka hoavy tsara ho azy ireo akory.
Ho an'izany, takian'i Bhutan ny fanànan'ny ankizy anaran-dray ara-dalàna alohan'ny hanomezana azy ny zo maha-olompirenena.
Ireny reny ireny sy ireo ankizy tsy misy ray no mandoa ny sandan'ny fidorohana toaka tsy mitsahatra mitombo ao, sy ny fampiasàna mivilana ny fombandrazana efa tranainy be mandeha mampiaraka amin'ny alina, antsoina hoe “Night Hunting ,” (Fihazàna amin'ny Alina), fanalahidy roa fototra ao ambadiky ny fitomboan'ny trangan'ny fanaovana firaisana ara-nofo tsy voaaro mialoha ny fanambadiana.
Tsy azo antoka izay hanjo  ireny ankizy ireny noho ny fahataràn'ny dingana fanoràtana anarana ao Bhutan rehefa tsy vitan'ny reny iray ny mamantatra izay rain'ny zanany. Voararan'ny lalàna ao Bhutan  ny fanalànjaza raha tsy ohatra angaha ka nisy tranga fanolànana, firaisana tamin'olompady, aretin-tsaina, na loza mitatao amin'ny ain'ilay reny. Vokany, marobe ireo vehivavy no miditra amin'ny fanalànjaza tsy araka ny lalàna, na miampita sisintany mankany India mba hampiato ny fitondràny vohoka.
hoy i Passu bilaogera :
Azoko amindràna fo kokoa ny fanalànjaza ; famonoana sela iray ho fitsinjovana ny soa ho an'ny vehivavy iray, sady fanafahana ny reniny sy ilay zaza amin'ny lavaka mangitsoky ny hadisoana iray. Tsy ilay glasy mamy izay ankafizin'ny maro akory ny fanalànjaza raha natao maimaimpoana, fa tsy misy afa-tsy io intsony no safidy tavela rehefa tsy mety ny fandehan-javatra. Tsy misy vehivavy ho faly handeha hanàla zaza noho ny fahafinaretana izany akory.
Manoratra ao amin'ny bilaoginy i Yeshey Dorji :
Taonjato maro nandetehan'ny fiaranamonina tao an-tsaintsika ny finoana hoe ny zaza teraka ivelan'ny tokantrano dia, tsy asiana adihevitra, zanahan'ny vadin'ilay vehivavy mitondra vohoka. Mamàka lalina ao am-parahatotsika io finoana io, izay manosoka hevitra hoe raha tsy manao izany izy dia ho voaozona. Saingy raha mandinika tsara io olana io lalindalina kokoa ianao, dia hahatsapa fa ampahan'olana faran'izay goavana be io. Ny marina dia tsy misy olona, afa-tsy ny reny irery ihany afaka hanamafy ny fahamarinan'izay zavanisy. Mba ho fantatrareo rehetra, mety ho notorontoronina avy tamin'olona avy any Timbuktu ilay zaza.
Io dia mitondra antsika amin'ny fahatsapàna fa rehefa ilaina ny mametraka ny maha avy ao Bhutan ny zaza iray, tsy misy zavatra afaka itompoana sy tsy mamitaka ary madio mifanaraka amin'ny fototarazo afa-tsy ilay reny Bhutanezy niteraka ilay zaza irery ihany. Koa satria tsy misy toerana ho an'ny fihatsarana ivelantsihy, heveriko fa hadisoana ny mamaritra hoe tsy maintsy teratany avo ao Bhutan ny rain'ilay zaza vao azo lazaina fa olompirenena ao Bhutan koa izy.
Sonam Ongmo  manoratra ao amin'ny bilaoginy :
Ankoatry ny fiatrehana ireo ray kanosa nampitondra vohoka azy ireny, ary namela ny reny sy ny zaza ho anaty tontolo manjavozavo tsy hay faritana, ny farany kely sisa atrehan'ny vehivavy dia ny fanaovan'ny governemanta tahaka io koa. Nahoana ny vehivavy no mila manaporofo hoe iza no rain'ny zanany vao hahazo zompirenena ho an'ny zanany? Ahoana raha toa ka niharan'ny fanolànana ilay vehivavy? Ary na tsy izany aza, inona no manakana azy na ny zanany tsy ho olompirenena? Tsy araka ny maha-olona/tsy mifaditrovana ny fametrahana ny vehivavy handia zavatra tahaka izany !
Andraikitry ny Firenena, andraikitry ny governemanta ny miantoka ho an'ny olompirenena, indrindra fa ny vehivavy, io zo io ary ny manamora araka izay azony atao ny mba hahazoan'izy ireo io zo io.
Yeshey Dorji  manoratra hoe :
Ny lalàna iray mitsinjo ny rehetra dia tsy tokony handrisika ny fitanilàna sy ny fomba fitondra tsy mitovy amin'ny lahy sy ny vavy. Fiarahamonina nentindreny mandrakariva isika ary noho izany, tsy ao anatin'ny toetrantsika mihitsy ny hitondra ny vehivavintsika ho toy ny olompirenena kilasy faharoa. Ny lalànantsika tokony hanome azy ireny ny fahamendrehana mitovy, zo mitovy ary fahalalahana mitovy amin'izay omena ireo lehilahintsika.
Mbola ho hita eo raha toa hanova ireo didy sy fepetrany ny governemanta ao Bhutan, na mbola ho olana mafimafy kokoa mitovy amin'izay efa iainany ankehitriny ihany no ho atrehan'ireo vehivavy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/03/04/79855/
 olona tsy manana firenena: http://nepalitimes.com/news.php?id=18967#.VtbjgZN94Y0
 Voararan'ny lalàna ao Bhutan: http://www.womenonwaves.org/en/page/5539/bhutan--organizations-and-clinics
 bilaogera : http://www.passudiary.com/2011/07/compassionate-bhutan-must-accept.html